Weydii Tagtadi Hore
5 Nofembar 2018
Haddaad booqatto Hiroshiima ee ku taal dalka Japan waxaad ku arkeysaa taallo laga dhissay meeshii lagu dhuftay atoomik bomka. Taallada waxaa ku qoran far jappanees ah oo macnaheheedu yahay: ha sameeyn fal sheeydaameedkan mar kale ” Do not repeat this evil”.
Waxaad mooddaa in ay sirtii lagyu sameeyay hubka nuklearka uu faraha ka baxay, oo la wada ogyahay, dowlado badan ayaa lagu tuhunsanyahay in ay faraha kula jiraan sameynta hubkan halista ku ah jiritaanka aadmiga, waana tan keentay in dowladaha waaweeyn in ay ku mashquulaan xakameeynta baahidda hubkan, waase goorma – waa mar ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen.
Somalia wax maka baratay tagtadii xanuunka badnayd?
Intaa hore arar beey ii ahyd laakin muhiimmadda qoraalkeeyga ayaa ah in aan tuso ummadda Somaliyeed in aadmigu khaladaad geli karo – balse ay haboontahay in aan lagu soo cel celcelin ee laga waantoobo. Tagto xanuun badan ayaa u gashay Somalia Taarikhda dhow, waa mid ay ka dhaxashay dagaalkii sokeeye ee labaatan jirsaday galaaftayna hanti wuxuu dalka lahaa, barakiciyayna malaayiin Somali ah oo ku kala baahay dunida dacalladeeda. Waxay ahayd musiibad nagu soo socotay laakin aan la dareemin waqti hore. Waxaa hubaal ah haddeey ogaan lahaayeen in ay sidan ku dhamaaneyso, in labada daraf ee uu dagaalka ka dhexeeyay maslaxada la dhex dhigay mid walba orod ku aqbali lahaa. Dib ayeey isu weeydiiyeen dad badan oo ah waxgarad Somaliyeed ah sababta heerkaa na gaarsiisay, hase yeeshee mid waliba jawaabtiisa wuxuu ku soo koobay laba eray oo ah "Cadaalad Darro".
Tagto aan ku habooneyn in looga sheekeeyo ubadkeenna, ayaa soo martay ummadda Somaliyeed labaatankii sano ee u dmbeeyay.Waa waqti lumay oo aan lahayn tarikh lagu faano, balse cashar laga qaadan karo si aanay u dhicin mar kale.
a) Caddaalad darro
b) Siyaasad Xumi
c) In ummadda loo jiheeyo dagaal ka baxsan difaaca dalka
d) Danta ummadda oo aan laga hormarin tallaabo kasto oo la qaadayo
e) Awoodda oo si ka baxsan sharciga loo isticmaalo